Qaybtii 13aad” Xusuusta Mujaahid Cali-guray Ee Gudagalkii Hargaysa 31may 1988kii | Marsa News
Qaybtii 13aad” Xusuusta Mujaahid Cali-guray Ee Gudagalkii Hargaysa 31may 1988kii
March 20, 2018 - Written by editor marsan
Hargaisa:(Marsanews) Waxa aanu si taxane ah idiinku soo gudbinaynaa taxanaha taariikhdii guda-galka hargaysa 31/05/1988ki qormadan taxanaha ah oo uu inooga waramayo islamarkaana uu soo diyaariyay Mujaahid Cali guray oo qormada ugu magacdaray Xusuusta Mujaahid Cali guray ee guda-galkii hargaysa 31may 1988kii, tiyoo aanu habeenkasta laba qormo idiin soo gudbino, waxaanu ku bilaabay sidan:
Dib waxay ka noqotaba balooy doorka maanta ah
Adaan daacad kuu ahay, hadii laygu kaa diro digashaan ka dhigayaa
Adna diid qof kula faqa.
Muj. Gacmo dheere AHN eh ayaa Muj. Khadar cid u diray, wax yar ka dib na nin baa noo yimi nooga waramay arimihii ugu dambeeyay oo dabcan noqonayay macluumaad uu bixin karo qof shicib ah oo caadi ihi.
Wuxu ka waramay in gelinkii hore shan baabuur oo browno ah lagu xidhay sameecado kuna wareegayeen magaalada iyagoo dadka u sheegaya in laga bilaabo sedexda galabnomo ay magaaladu bandoo tahay qof gurigiisa ka soo baxa iyo gaadiid socon kara ay mamnuuc tahay.
Dadka waxa bandooda looga sheegay shantaa baabuur eh wax ciidan ah oo dhex jooga magaaladu ma jiraan kol ay roondo ilaalinaysa bandooda tahayna, hadana dadku sedexdii galabnimaba way xaroodeen waxa xereeyay na waa baqdin uun eh hal askari ma dhex joogo xaafadaha.
Wuxu yidh” anigaa galabta soo dhex maray oo dusha ka soo wareegay cid I joojisay na may jirin shantii brawn ee micrifoonada lagu xidhay shantii ba waxan ku sii dhaafay xero digaagta, hadaanu gabalku dhicin idinka laftiinu halkan ba waa ka raki lahaydeen.
Wuxu yidhi ” sidii Burco loo galay nimanki waa wisiisi oo waxay bilaabeen xadhig aan loo kala aabo yeelayn haday sii socoto na waxan is leeyahay nin reer Sh. Isaxaaq ah oo hebel la yidhaa oo la badbaadayaa ma jiro.
Nimanku waxay ugaadh sanayaan odayaasha magaca leh, ganacsatada, aqoon yahanada, madaxda cid ay reebayaan ma jirto.
Markaanu waxoogaa halkii ku sheekay sanay eenu ku shaahaynay ayaanu ninkii odayga ahaana fasaxnay anaguna xagii magaalada u dhaqaajinay .
Halkan xero digaagta markii hore eenu Muj. Gacmo dheere isla eegaynay yoolalka muhiimka ah ee cadowga waanu ku darnay. Waxanu isla qaadanay in ciidan aan ka badnayn boqol mujaahid oo gaar ah u qorshayno xero digaagta, waayo waxa yaalay lix qori oo madaaficda 100mm ah( waa qoriga taangiga ruushka ah) .
Lixdaa qori waxay u dhigmi kareen lix taangi oo dhulka yaala, hase ahaato eh markii dambe een u bandhigay Muj. Ibraahim Dhega Wayne, isagu xero digaagta iyo yoolal kale oo markii hore aan Gacmo dheere ku qanciyay isagu wuxu ka qabay aragti kale. Wuxu igu yidhi ” iska dhaaf kuwaa yar yar oo dhan hadii aynu kuwa waawayn qabsano iyagu macno ma yeelanayaan eh” Kuwa waawayn wuxu uga jeeday dabcan, taliska qaybta, birjeex, airportka, iyo dabada cadaada.
Waxan is leeyahay Ibrahim wuxu malaha tixgelinayay in xoogu goobo xadidan ku dhaco oon qayb qayb samin.
Marka ay tahay kadimada magaalada laga geli karo Mujaahid Khadar oo ka noogu da’da yarna ahaa ayaa noogu aqoon badnaa waayo wuxu ka shaqasan jiray jaadka oo magaalada lagu geliyo kootarbaan ahaan.
Markaa jaadluhu waxay si fiican u kala barteen tubaha ugu haboon ee dhuumasho magaalada lagaga geli karo, is bedbdel koodana waxay ula socon jireen si joogto ah.
Bal ka sheekee
Waxan jecelahay in aan ku soo af jaro taxanihii Bal Ka Sheekee markii uu col waynuhu soo gaadhay Hargeysa ee talska qaybta 26aad uu hilaacay.
Markii aanu magaalada soo galay waxa noogu muhiim sanaa wuxu ahaa in Muj. Gacm dheere aanu helo meel aamin ah oo uu ka heli karo kaalmo.
Markii aanu fakarnay Guuleed restaurnt oo markaa uu maamule ka ahaa walaalkii Cali ayaanu damacnay bal in xaaladiisa aanu hubino.
Aniga iyo Cisman iyo Khadar ayaa ka hor marnay Muj. Gacmo dheere iyo labadii mujaahid ee kale na meel dambe ayuunu kaga tagnay.
Markaanu marayno meel ku beegan halka imika uu yahay Summer Time restaurant ayaa dhinaca bari guri kaga soo jeeda nin ka soo baxay, guruga anigu cid ku jirtay maan Garanayne Muj. Cisman Awr liqe ayaa iigu yidhi waa gurigii Ismaciil Yare( wasiirkii hore ee Arimaha Gudaha)oo ah Joomitar ka shaqeeya dawladda hoose.
Ninkii baanu joojinay ka dib na baadhnay.
Wax hub ah ma sidan hase ahaato eh aqoonsigiisa oo aanu jeebkiisa ka helay ayaa noo cadeeyay in uu yahay sarkaal xooga dalka ka tirsan.
Hayb ahaan wuxu sheegtay gurgure qiyaastii markaa waxay xidid yihiin Ismail Aden anagu na intaa waanu garanaynaa.
Wuxu noo sheegay inu naafo yahay oo wakhtigaa anu shaqadii ciidanka haynin. Wuxu fahmay in aanu nahay SNM dabeed na wuxu noo sheegay in ay isku lod
ahaayeen Maxamed Xasan saaxiibkii na uu yahay.
Mid naga mid ah ayaa dib ugu noqday Muj. Gacmo dheere oo u soo waramay wax yar ka dibna Muj. Gacmo dheere oo soo luuday ayaa bartii noogu yimi oo aanu u dhiibnay aqoonsigiisii waxanu ku eegay toosh. Wax yar intuu aamusay ayuu yidhi ” ma baabuurkii berigii kula qaibmaybaa”, markaas ayay ninkii werwersanaa intay neefi ka soo booday uu yidh ma Maxamed Xasan baa, suaashii ba kama jawaabin ee halkii ayaa la isku caanaqay.
Ninkaas wax war ah oo u dhinaa ma jirine isaga ayaanu ka helay macluumaadkii ugu dambeeyay dhinaca ciidanka cadowga waayo wuxu la fadhiyay sarkiishii sar sare oo sheekadoodu ahayd difaaca nagaalada iyo talaabooyinkii ay qaadeen oo dhan. Lakiin nasiib daro waxba uguma fila hadii ay soo dhaqaaqeen Col Waynihi, waayo wax is gaadhsiin ah maanu sidan, hadii se ay dib u sii dhacaan si aanu yeelo ba way noqon lahayd suurto gal in macluumaadkan cusub aanu gaadhsiin karno ciidanka.
Halkii baanu sedexdayadi kaga dhaqaanay sedexdii kale iyada oo weli ninkii warkii u wado. Laamida ayaanu mid iyo xagii Guuleed u qabanay.
Wadada wax socdaa ma jiro.
Makaanu gaadhnay albbabka wayn ee Guuleed wadada dhanka kale geed ku yiil welina ku yaala waxa hoos fadhiyay nin keligii ah oo hadana hadlaya oon mar qudha afka isku darayn, dabeed waxay noqotay bal in xaalkiisa aanu iska hubino wakhtiguna waa nagu cidhiidh oo inta aan la na arag waa in aanu u dhacno Guuleed.
Adigu ninkii hubinay waxanu aragnay in uu yahay nin maskaxda wax uga dhiman yihiin. Hadan laamigii ka soo talaw nay.
Intaan qorigii Khadar u dhiibay ayaan Cismaan oo forara dusha iskaga taagay ayaan markii ba deyrkii xaga kale isaga shubay.
Nasiib daro waxan la kulmay dhibaato aanan markii hore ku talo gelin.
Shaw gidaarkan aan ka booday waa mid cusub oo waxa ka dambeeya gidaarkii dayrkii hore oo sidiisii u dhisan oo malaha masaafad laba mitir ah oo keliya u jira.
Markaan labada dhinac ba eegay wixii iigu horeeyay een xusuustay wuxu noqday qorigii oo gacantayda ka maqan.
Dib baan deyrkii isugu soo qaaday aniga oo hoos u leh waar qoriga ii soo dhiib ilaa qorigi uu gacan tayda soo galay na maan aamusin xaaladaydu na may degin.
Wax yar ka dib waxaa i soo gaadhay Muj. Cisman oo ka tuuraya, labadayadii oon dheg la qabto lahayn ayaa daf nidhi dhismaha xaga waqooyi ka soo jeeda ee madbakha ka soo horeeya.
Intii ku jirtay ayaanu qoryihii ku qabanay oo ku amarnay inay beerka u seexdaan gacmaha a qadaadka saaraan, sidii baanay yeeleen.
La soco qaybta 15aad oo ah qaybtii ugu danbaysay qormadani